विदेशमा भएका नेपालीलाई अर्को साताबाट नेपाल ल्याउने तयारी, कसले पाउनेछन पहिलो प्राथमिकता ? हेर्नुहोस -
May 29, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on विदेशमा भएका नेपालीलाई अर्को साताबाट नेपाल ल्याउने तयारी, कसले पाउनेछन पहिलो प्राथमिकता ? हेर्नुहोस
काठमाडौं १६ जेठ । सरकारले तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई प्राथमिकिकरण गरेर स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो।
स्वदेश फर्किनका लागि सरकारी सेवामा रही तालिम वा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नागरिकले सम्बन्धित देशको दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउनुपर्ने छ। सरकरले सम्पूर्ण देशबाट विवरण प्राप्त भएपछि नेपाल वायु सेवा निगम वा नेपालका अन्य वायु सेवा निगमबाट उनीहरुको उद्धार गर्नेछ। सचिव विडारीका अनुसार प्राप्त विवरण परिचान गरी परराष्ट्रमन्त्रालयले त्यसको सूची संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍ययन मन्त्रालयलाई दिनेछ। पर्यटन मन्त्रालययले हवाई उडानको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने छ।
श्रीलङ्का आक्रमण : मृतकको सङ्ख्या २९० पुग्यो, प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा निकाय माथि छानबिनको माग, कर्फ्यु हटयो
April 22, 2019 April 23, 2019 अखवार अनलाइन
छोरा हत्या गरेको आशंकामा आमा पक्राउ
नेविसंघ ओखलढुंगाको सभापतिमा गोविन्द कोइराला, १९ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति गठन
January 24, 2019 January 24, 2019 अखवार अनलाइन
सुनकोसीमा बस दुर्घटना: मृतकको संख्या १७ पुग्यो, ४६ को उद्धार
November 3, 2019 अखवार अनलाइन
राहत लिएर धुर्मुस सुन्तली पुगे बारामा
April 1, 2019 अखवार अनलाइन